Vono olona tsy tanteraka :: Nogadraina ilay reny nanipy zanaka tao anaty rano maloto • AoRaha
Vono olona tsy tanteraka Nogadraina ilay reny nanipy zanaka tao anaty rano maloto
Nitantara tamin’ny polisy ny antony saika namonoany ny zanany ilay vehivavy iray tratra nanipy zazalahikely, herintaona sy tapany, tao amin’ny lakandranon’Andriantany, teny 67Ha, tamin’ny alatsinainy lasa teo. Nambarany fa noho ny fahasarotan’ny fiainana no niteraka ny hevi-dratsy hamonoana an’io zanany io, araka ny tatitra avy amin’ny mpanao famotorana. Nentina teny amin’ny Fampanoavana izy, afak’omaly, ka naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora.
“Tamin’ny fakàna am-bavany natao azy no nilazan’ilay vehivavy fa noho ny disadisa sy ny tsy firarahian’ny rain’ilay zaza no antony saika namonoana an’io zanany io tao anaty rano maloto. Teo ihany koa ny fahasarotan’ny fiainana ka tsy ho vitany ny famelomana ny zaza”, hoy ny polisy nanao ny famotorana.
Tsy dia fahita iny tranga teny amin’ny 67Ha, tamin’ny alatsinainy iny. Avy any atsimo, amin’ny faritry ny paositra 67Ha, ny vehivavy iray nitrotro zaza. Nanaraka ny sisin’arabe manamorona ny lakandrano maloto izy ary nandeha tao ambadiky ny fiara iray nijanona teo amoron-dalana. Tampoka teo, nisy nahita ilay zaza natsipiny tao anaty rano maloto. Nitsoraka namonjy azy ny lehilahy iray nanamboatra fiara teo akaiky teo. Avotra ny ain’ilay zaza. Nitangorona ny olona. Nosamborina ilay vehivavy. Fantatra fa zanany ihany ity nokasainy hovonoina ity.
“Zanany faharoa io nariany tao anaty lakandrano io. Napetraka eny amin’ny toby fitaizana zaza kamboty, eny Ambohidratrimo, ilay zazalahikely”, hoy ihany ny polisy.
Fanindroany izao no nisy reny voatondro ho namono zanaka. Ankoatra ity teny amin’ny 67Ha ity dia efa nisy vehivavy iray voatazona am-ponja noho ny namonoany ho faty ny zanany roa vavy, teny Ankasina, tamin’ny faramparan’ny volana janoary lasa teo.
Vahilava Ampitatafika :: Lehilahy hita faty tao anaty tatatra